indlu yangasese Ngokubanzi: i potential inethemba
Kunye nokukhula ngokukhawuleza koqoqosho China kunye nokwandiswa kwemfuno kwimarike, brand amazwe xa zishishina zisithengisela sanitary baye bangena kwimarike yasekhaya, yaye baye babeka imibombo kwimarike ekupheleni eliphezulu-zasekhaya. Xa kujongwa ukhuphiswano yangaphandle, amashishini xa zishishina zisithengisela sanitary eTshayina kufuneka ukufumana enye indlela nokuqala ukucinga ukuba ukwenza njani indlela yokuphuma.
Ukwanda koongxowa amazwe brand zentengiso sanitary ahlaselayo brand kazwelonke
Xa nengxaki eziziswa lokhuphiswano yemiyinge amazwe zentengiso ucoceko, brand xa zishishina zisithengisela sanitary ngezizwe kwizixeko yokuqala omqolo eTshayina waqalisa ukuziva Unjengokuphola waza wajika ingqalelo yabo kwiimarike yesibini neyesithathu omqolo. Ngaphezu koko, bakhawuleza baqala ukuqulunqa esihambelanayo nakwiindlela zokuthengisa kunye neentengiso ukuqinisekisa ukuba imarike-umgca wokuqala abazange balahlekelwe, ngelixa ekwandiseni isabelo lorhwebo kwiimarike yesibini neyesithathu omqolo.
Noko ke, ulawulo kunye nokulawula iinkqubo ze imarike real estate China ziye zakhokelela ekunciphiseni oqhubekayo isiphelo ophezulu ezithengiswayo ezifana nemizi, kunye nokungabikho kwentengiso isiphelo ophezulu-lwezindlu yorhwebo kwizixeko nolomgca omqolo wesibini, ngaloo ndlela erhola phantsi ekupheleni ophezulu kwimarike zentengiso yococeko nzeke ukuba nciphisa. Okwangoku, brand ekhaya ngcono yasekhaya ezaziwayo-kakuhle ukuba ingenelelwe isiphelo eliphezulu-Ware sanitary kwimarike, nto leyo iba nefuthe elikhulu on brand ngamazwe Ware sanitary.
Ngelo xesha, kunye nophuhliso olukhawulezayo kushishino zentengiso zococeko eTshayina, baye yemiyinge odumileyo kweli ezifana Wrigley kunye Jiu Mu apho. Iihotele obuphezulu abaninzi kunye neehotele baqhutyelwa kuphosa hydrangea ukuya yemiyinge zasekhaya kunye nomgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi. Ukwanda koongxowa yemiyinge yesizwe zilahlekelwa isikhundla sibubona yemiyinge ngamazwe Ware sanitary.
ixesha Post: Jan-18-2019